Xafnium Powder, Hf - Goodao Technology Co., Ltd.
Caanaha molecular. Hf
Lambarka CAS 7440-58-6
Sifooyinka budada madow ee cawl
Barta dhalaalida 2227C
Bar kulaylka 4602 C
Cufnaanta . 13. 31g / cm3
Isticmaala waxaa badanaa loo isticmaalaa sida raajada cathode iyo tungsten silig soosaarka warshadaha hafnium saafi ah oo leh balaastigga, farsamaynta fudud, iska caabinta heerkulka sare, waa qalab muhiim u ah warshadaha tamarta atomiga Qaybta iskutallaabta qabatinka kuleylka kuleylka ah, waa tan ugu fiican ee nafaqada leh, canbe loo isticmaalo xakamaynta atomikada usha iyo qalabka ilaalinta
Xafnium qalin bir cawl ah, dhalaalaya macdan; Waxaa jira laba nooc oo loo yaqaan 'hafniummetal': hafnium waa nooc cufan oo cufan oo xirxir ah (1750 ℃) oo leh heer-beddel ku-meel-gaadh ah oo ka sarreeya zirconium. Birta Hafnium waxay leedahay noocyo kala jaad ah oo heerkulkiisu sarreeyo.
Birta Hafnium waxay leedahay qayb sare oo nuugista nuugista ah waxaana loo isticmaali karaa inay tahay maadada acontrol ee reaktarrada.
Qaab-dhismeedka loo yaqaan 'crystal structure' waxaa loo qaybin karaa laba nooc: xirxirmo cufan oo laba geesle ah (-) heerkulkoodu ka hooseeyo 1300 ℃; Xagga sare 1300 ℃, waa kuleylka xarunta jirka (- formula).
Bir caag ah oo adkaata oo jaban iyadoo ay jiraan waxyaalo wasakh ah. Xasilooni hawo dhexdeeda, kaliya waxay ku madoobaan dusha sare markii la gubo. Fiilo ayaa lagu shidi karaa dabka dabka. Zirconium sida dabiiciga ah. Maaha biyo, milo aashito ama ficil alkali xoog leh, laakiin waa fududahay in lagu milmo aqua aqua iyo hydrofluoric acid. Waxay leedahay +4 macmacaan guud ahaan. Daawada Hafnium (Ta4HfC5) waxaa lagu yaqaanaa inay leedahay barta ugu sareysa ee dhalaalida (qiyaastii 4215 ℃).
CAS maya. 7440-58-6
Barta dhalaalida 2 227 ℃
Barta karkaraya 4602 ℃
Cufnaanta 13.31g / cm3 (20 ℃)
Waxyaabaha ku jira Duufaanta (PPM) 5.3
Cunsurrada qorraxda: (qaybo halkii milyan) 0.001
Cunsurka waxyaabaha ku jira biyaha badda: (PPM) 0.000007
Adkaanta Mohs 5.5
Heerka uu ku socdo codka (m / S) 3010
Tayada proton 1.20456E-25
Cufnaanta qaraabada Proton 72.504
Hafnium wuxuu aad ugu eg yahay zirconium waxyaabaha kiimikada ku jira. Waxay leedahay iska caabin daxal wanaagsan mana sahlana in lagu weeraro xalka aqueous base asic acid. Waxay si fudud ugu milmi kartaa hydrofluoric acid waxayna sameysaa dhisme fluorinated ah. Heerkulka sare, hafnium sidoo kale wuxuu si toos ah isugu dari karaa gaasaska sida oksijiinka iyo nitrogen si loo sameeyo oksaydh iyo nitrides.
Hafnium waa waxtar maxaa yeelay waxay si fudud u soo saartaa elektarooniyo (tusaale ahaan fiilo u ah laambad anincandescent). Daawaha hafnium iyo tungsten ama molybdenum ayaa loo isticmaalaa sida elektaroodhiyada tubooyinka dheecaanka danab sarreeyaa. Caadi ahaan loo isticmaalo
X-ray cathode iyo warshadaha wax soo saarka tungsten. Hafnium Pure wuxuu leeyahay balaastig, fududahay in la farsameeyo, iska caabinta heerkulka sare iyo iska caabinta daxalka, waa shey muhiim u ah warshadaha tamarta atomiga. Qaybta iskutallaabta qabatinka kaabsalka kuleylka ee kuleylka ah ee 'Hafnium' waa nuqul nuugista ugu habboon, kaas oo loo adeegsan karo qori kontorool iyo aalad difaac ah oo ku shaqeeya fal-celinta atomiga.
Hafnium budada ACTS oo ah xoojinta gantaalada. Cathodes of tuubooyinka raajada waxaa lagu soo saari karaa warshadaha korantada. Waxyaabaha loo yaqaan 'Hafnium alloys' ayaa loo isticmaali karaa inay noqdaan waardiyeyaasha hore ee gantaallada biriijka iyo gawaarida dib u soo noqoshada, iyo HF-TA alloys ayaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo birta qalabka iyo qalabka iska caabinta.
Hafnium waxaa loo isticmaalaa inuu yahay cunsur lagu daro aaladaha u adkaysta kuleylka, sida tungsten, molybdenum, iyo tantalum. HfC waxaa loo isticmaali karaa sida carbide lagu daro sababtoo ah adkaanta iyo barta dhalaalaysa awgeed. Barta dhalaalka ee 4TaCHfC waxay ku saabsan tahay 4215 ℃, oo ah tan ugu sareysa ee kiimikada la yaqaan. Hafnium waxaa loo adeegsadaa inuu ku soo baxo nidaamyo hawo badan. Hafnium getter wuxuu nidaamka ka saaraa oxygen la'aan, nitrogen, iwm. Gaas la'aan. Hafnium badanaa, waxaa loo isticmaalaa sidii wax lagu daro saliida haydarka si looga hortago in saliidda haydarka lagu shubo howlaha halista sare leh, iyadoo lala yeelanayo sunta ka hortagga qalalaasaha, astaamahan, sidaas darteed guud ahaan waxaa loo isticmaalaa saliidda hidda-warshadaha. Saliida Haydarooliga Caafimaadka. Hafnium sidoo kale waxaa loo isticmaalaa processor-kii ugu dambeeyay ee 'intom45 nanometer'.
Hore: Budada Zirconium, Zr
Xiga: Budada Vanadium, V